Abuur Qariirado Fikir iyo Maskaxeed | Barnaamijyada ugu fiican iyo Barnaamijyo
Inicio/Talo soo jeedin/tutorial/Khariidad fikradeed/Barnaamijyada ugufiican si loo abuuro maab iyo maskax khariidado [BILAASH].
Khariidad fikradeedTalo soo jeedin
Ku abuuri khariidadaha fikradda ugu fiican barnaamijyadan bilaashka ah
0 1.059 4 daqiiqo akhri
Waxaan horey u ognahay sida khariidadaha fikradaha faa'iido leh ay ugu wacan tahay shaqadooda wax ku oolka ah ee barashada, haynta iyo xifdinta fikradaha. Bilowgeeda, waxay ahayd aalad ay ardadu u adeegsadaan fududaynta soo koobida qoraalada waawayn oo si garaaf ah loogu muujiyo. Laakiin maanta waxaa loo isticmaalaa meelo kale oo badan sida ganacsiga, daryeelka caafimaadka iyo xitaa suuqgeynta dhijitaalka ah; waana taas tan ugu fiican barnaamijyada abuurka khariidadaha fikradda waxaad awoodi doontaa inaad si wanaagsan oo fudud u muujiso aqoontaada.
Haddii abuuritaanka khariidadaha maskaxda iyo maskaxda ay yihiin suunkaaga xoogga leh, ku baashaal barnaamijyadan oo abuuro yaabab.
Waa barnaamij la isticmaalo si loo abuuro khariidado maskaxeed iyo fikrad. Nooca ugu dambeeyay wuxuu ka yimid 2016 iyadoo la raacayo lambarka V3.7.2, ee ku guuleystay Abaalmarinta 'EclipseOn' ee 2008. Laakiin taas looma isticmaalo oo keliya, waxay awood u leedahay inay hesho qoraalo maqal ah, muusig, lifaaqyo, xiriiriyeyaal si loogu isticmaalo jaantusyada, jaantusyada iyo khariidadaha; iyo sida ugu fiican oo dhan, waxaad awoodi doontaa inaad wadaagto oo aad u dhoofiso khariidada la abuuray qaabab kala duwan. Tan waxaa loo heli karaa nidaamyo sida Linux, Mac iyo Windows illaa 9 luqadood, oo ay ku jiraan Isbaanish, Ingiriis iyo xitaa Kuuriyaan dhaqameed. Waxay leedahay interface fudud oo saaxiibtinimo, oo aad ku maamuli kartid tabs oo aad gasho.
Sida tii hore oo kale, barnaamijkan ayaa looga bartay abuuro khariidado maskaxeed, khariidado fikradeed, jaantusyo, jaantusyo qulqulaya, jaantusyo urur iyo xitaa qorshayaasha dhismaha la dego. Waa aalad aad u awood badan, in waqti iyo u hurid aad wax badan uga faa'iideysan karto. Tan waxaad ku awoodi doontaa inaad ku samayso waxyaalo yaab leh. Waxaad ku heli kartaa bilaash muddada tijaabada ah, laakiin haddii dantaadu tahay inaad sii wadato isticmaalkeeda waa inaad iibsataa. Qiimahiisu waa qiyaastii US $ 6 bishiiba. Noociisii ​​ugu dambeeyay waxaa la sii daayay 2018 oo shaqeynaya Microsoft Windows oo ku qoran luqadda Ingiriisiga.
Way fududahay in la isticmaalo, maaddaama barnaamijku leeyahay in ka badan 4.000 oo arrimo, qaar fudud, qaar kalena ay adag yihiin; laakiin isaga ayaa ka taxadari doona abaabulka macluumaadka aad geliso. Dhig amarka aad rabto khariidadiina waa diyaar; waxay la jaan qaadi kartaa Box, Google Drive iyo Dropbox.
Waajibaadkaaga hadda ka dib looma baahna in keligaa la sameeyo. Abuuritaanku waa barnaamij loogu talagalay abuuritaanka khariidado maskaxeed iyo fikradeed, iyo sidoo kale jaantusyo iyo jaantusyo, halkaas oo fikradda ah ka yar ayaa ka badan, Waxay ku saabsan tahay dhowrista fudeydka jaantusyada iyadoo aan luminin nuxurka iyo ujeeddada jaantuska; Isku xirkeeda waa shiraac aad ku bilaabi karto adoo dhigaya emaylkaaga. Intaas waxaa sii dheer, waxaad codsan kartaa wada shaqeynta khubarada waqtiga dhabta ah. Barnaamijkan waxaa la abuuray sanadkii 2008-dii waxaa abuuray hal abuur leh, wuxuuna leeyahay laba nooc; nooc khadka tooska ah ah iyo mid App ah.Waxay keydisaa qiyaastii 1.000 shey, oo dhammaantood ay abuureen khubaro. Qorshahaaga aasaasiga ahi waa lacag la’aan, Halka aad ka qorsheyneyso mashaariicdaada oo aad horumarineyso dhammaan fikradahaaga; diyaar u ah Mac, Windows iyo Linux.
Iyadoo la adeegsanayo tusaalooyin si loo abuuro khariidado fikrad fudud oo fudud!
Waa barnaamij khadka tooska ah ku soo kordhay codsiyada malaayiin isticmaale, oo loo tixgeliyo qaybo badan oo adduunka ah oo ah barnaamijka ugu weyn ee khadka tooska ah loogu talagalay abuurista astaanta, qaabeynta muuqaalka, khariidadaha maskaxda iyo fikradda, jaantusyo, jaantusyo, sawir-maskaxeed, xitaa waad abuuri kartaa kaarka kirismaska. Waxay leedahay tusaalooyin asal ah oo xusid kasta ah, oo ka bilaabma astaan ​​illaa abuurista sheekooyin shabakadaha bulshada, sawiradeedu waxay qaadi karaan dhaq-dhaqaaq, maqal iyo in lagu kaydiyaa siyaabo kala duwan
Noociisa ugu weyni waa iyada oo loo marayo degelkeeda rasmiga ah ee bilaashka ah waxaadna ka geli kartaa Gmail, ama waxaad ku sii wadi kartaa koontadaada Facebook, haddii aad ku guul darreysato inaad akoon samaysan karto; Waxay sidoo kale leedahay nooc PRO ah oo ku siinaya inaad marin u hesho waxyaabo dheeraad ah sida sawirrada, walxaha, iyo arrimo kale; ugu dambayntiina waxaa jira nooca barnaamijka. Waa qalab ku habboon wada shaqeynta kooxda, maadaama ay kuu oggolaaneyso inaad macluumaadka la wadaagto xubnaha kale. Waxay leedahay codsi ku saabsan iOs waxaadna u isticmaali kartaa nidaam kasta oo qalliin.
Barnaamijkan khadka tooska ah waa la jaan qaada Android iyo iOSAdiga ayaa ku samayn kara nooc kasta oo jaantus ah, go'yaal waxbarasho, noocyo khariidado kala duwan ah, waxaad kula xiriiri kartaa ardayda iyo macallimiinta si aad ula wadaagto macluumaadka adoo adeegsanaya xiriiriyeyaasha 'Share link' option Qorshahaaga aasaasiga ahi waa lacag la’aanSi kastaba ha noqotee, hababkaaga ayaa la daabici doonaa. Waxa kale oo ay leedahay nooc Premium ah, halkaas oo habraacyadaadu noqon doonaan kuwo gaar ah oo waxaad ku heli doontaa keyd badan.
Abuuritaanka khariidad maskaxeed barnaamijkan waa mid aad u fudud, waa inaad gujisaa 'Abuur' liiska laga helay dusha sare ee shaashadda, waxaa si otomaatig ah loo abuuri doonaa oo lagu keydin doonaa galka 'Lama qoondeyn'.
Haddii aad rabto wax deg deg ah oo sahlan oo aad ku abuuri karto khariidado fikrad ah, barnaamijkan adiga ayaa loogu talagalay.
Tan waxaad ku sameyn kartaa naqshadda khariidaddaada maskaxeed ama fikradeed, iyo sidoo kale jaantusyo kale, laakiin sidoo kale, waxay kuu oggolaaneysaa inaad wax ka beddesho, tirtirto oo xitaa daabacdo. Coogle wuxuu leeyahay nooc bilaash ah oo kuu ogolaanaya inaad haysato oo keliya 3 jaantus gaar ah; iyo Premium oo laga bixiyo US $ 5 bishiiba, oo bixiya ikhtiyaarro kala duwan sida waxyaabo badan oo la isticmaali karo, arrimo badan iyo jaantusyo. Waxaa loo heli karaa nidaamka hawlgalka ee Windows, iyo sidoo kale Android iyo iOs.
Waxqabadka barnaamijkan khadka tooska ah waa mid badan oo waliba bilaash ah. Soosaarahan khadka tooska ah ee khariidadaha fikradda ah waxaad ku habboon tahay inaad ku darto midabka, farta, iyo qaababka xariiqa dookhaaga; waxay dhiirigelinaysaa iskaashiga iyo wada shaqeynta waqtiga dhabta ah, taasoo sahleysa in laga doodo fikradaha lana dedejiyo go'aan gaarista isbeddelada lagu fulinayo.
Waxay leedahay tiro badan oo arrimo ah oo uma baahna soo dejiso. Loo heli karo Windows, Linux, iyo Mac. Abuur oo la wadaag khadka tooska ah ee Lucidchart. Waxay kaloo leedahay nooca caymiska oo ah saddex qaybood, sida shaqsi Qiimaha US $ 7,95, isku duubni (ugu yaraan 3 isticmaale) oo qiimihiisu yahay US $ 6,67 qofkiiba bishii iyo shirkad taas oo ay tahay inaad la xiriirto iyaga si aad u hesho qiime.
Xusuusnow intaas ka sokow barnaamijyadan internetka waxaad sidoo kale sameyn kartaa ku abuuri khariidadaha fikradda kombuyutarkaaga adoo adeegsanaya Microsoft Office, ama adeegsiga erayga processor 'Word', soo-saaraha soo-jeedinta 'Power Point' ama barnaamijka nashqadda aasaasiga ah ee 'Publisher'; u oggolow fikirkaagu inuu qulqulo oo aad u sameyso sidaad jeceshahay, ku darista astaamo shaqsi ahaaneed sida shaqsi kasta habka waxbarashadiisa. Sidoo kale mid kale oo ka mid ah qoraalladeena waad awoodi kartaa ogow astaamaha khariidadaha fikradda.
Canva khariidadaha fikradda canva muuqaalada khariidad fikrad Xirxir sida loo abuuro khariidado fikradeed sida loo sameeyo khariidadaha maskaxda sida loo abuuro jaantusyada ururada naqshadaynta fikradda abuurka maskaxda iyo khariidadaha fikradda abuuro naqshad iyo jimicsi Abuur khariidad fikradeed Abuur khariidad maskaxeed iyo khariidad fikrad ee barta awoodda samee khariidado maskaxeed oo bilaash ah abuur maababka maskaxda iyo maskaxda ee xafiiska microsoft samee khariidado maskaxeed iyo maskaxeed bilaash samee khariidado maskaxeed samee maabyada maskaxda ee xafiiska microsoft samee khariidadaha maskaxda ee kombuyuutarka samee khariidado maskaxeed kombuyuutarkaaga abuuro jaantusyo bilaash ah hal abuur leh horumariyo maskaxda iyo khariidadaha fikradda ee ereyga fikradda dhaliyaha khariidadda qoraalka GoConqr khariidadaha fikradda hal-abuurka ah khariidadaha fikradda eray ahaan khariidadaha fikradda bilaashka ah khariidado fikradeed oo bilaash ah khariidadaha fikradda bilaashka ah khariidadaha maskaxda bilaashka ah bogagga samaynta khariidadaha maskaxda barnaamijka si loo abuuro khariidado maskaxeed barnaamijyo lagu abuurayo khariidado fikradeed oo lacag la’aan ah SmartDraw fikradda khariidaynta barnaamijka Xmind
OGWhatsApp si bilaash ah ugu soo dejiso moobilka
[SEO GUIDE] Sida looga faa'iideysto Pinterest si loo meeleeyo degel
Adiga lagugula taliyay:
MAXAY YAHAY IYO MAXAY UJEEDO
Waa maxay Khariidadda Fikradda iyo maxaa loogu talagalay?
Faa'iidooyinka isticmaalka Khariidadda FikraddaAstaamaha Khariidadda Fikradda
Fikradda fikradda ee NIDAAMKA NERVOUS
Khariidadda Fikradda BIYAHA
Sida loo abuuro Khariidad Fikrad ah oo ku jirta Ereyga
Eeg qoraalada aan ka helay barta Instagram [FUDUD]